Dabere na akụkọ sitere na ụlọ ọrụ data na nyocha nke GlobalData, nnukwu ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ Amazon na-eme atụmatụ ịbanye na mkpuchi mkpuchi ụgbọ ala na ọgba tum tum.
Akụkọ a bụ ihe iyi egwu na-enweghị mmasị nye ụlọ ọrụ mkpuchi ndị ọzọ nke gafere afọ ịma aka na ọrịa COVID-19 niile.
Nbanye Amazon na ahịa mkpuchi ga-enyere aka ịgbanwe atụmanya ndị ahịa maka ịzụta ngwaahịa mkpuchi sitere na ụlọ ọrụ ndị na-abụghị ọdịnala.
Amazon abụghị naanị otu, n'ihi na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị elu dị elu dị elu (dịka Google, Amazon, na Facebook) nwekwara nnukwu ndị ahịa ha nwere ike iji mgbe ha na-ere mkpuchi.
N'agbanyeghị ndị ahịa dị ugbu a, nnyocha ndị e mere na-egosi na ndị mmadụ ka na-ala azụ ịzụta n'aka ha.
GlobalData nke 2019 UK Insurance Consumer Survey chọpụtara na 62% nke ndị na-azụ ahịa agaghị achọ ịzụta ngwaahịa mkpuchi si Amazon. N'otu aka ahụ, 63%, 66% na 78% nke ndị na-azụ ahịa agaghị azụta mkpuchi sitere na Google, Apple na Facebook, n'otu n'otu.
Onye nyocha mkpuchi GlobalData, Ben Carey-Evans kwuru, sị: “Onye ọrụ teknụzụ a na-ebupụta ngwaahịa a na India, mana azụmahịa ya sara mbara nke ukwuu, nke nwere ike mechaa mee ya onye asọmpi siri ike nye ụlọ ọrụ ụwa niile.
Ka ọ dị ugbu a, mkpuchi akpaaka bụ otu n'ime usoro ngwaahịa ole na ole nke COVID-19 anaghị emetụta. Ka ndị mmadụ na-eme njem pere mpe, ọnụ ọgụgụ nke nkwupụta ahụ agbadaala nke ukwuu. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ ịnshọransị agaghị anabata asọmpi a ọzọ, ebe a na-atụ anya ire ahịa ụgbọ ala ka ọ daa mgbe ọrịa a gbasasịrị ka ndị ahịa na-aga n'ihu na-arụ ọrụ site n'ụlọ. ”
Yasha Kuruvilla, onye nyocha mkpuchi na GlobalData, kwukwara, sị: “Ebe ọ bụ na ndị ahịa anaghị achọ ịzụta ụlọ ọrụ mkpuchi sitere na ụlọ ọrụ teknụzụ, ọ bụ atụmatụ ka mma iji kwado ndị na-eweta ndị ọzọ, ọ dịkarịa ala ruo mgbe ọ ghọrọ aha ụlọ ọrụ mkpuchi a ma ama.
Mmekọrịta Amazon na ụlọ ọrụ mkpuchi ụlọ ọrụ Acko kama ụlọ ọrụ guzobere na-egosiputa ọchịchọ ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ dijitalụ na agile. Nke a agaghị eme ka nrụgide karịa ụlọ ọrụ ndị dị ugbu a, mana ọ bụghị naanị n'ihi ahịa ahụ Enwere ndị ọhụrụ na-abanye ọhụrụ, ma ọ bụrụ na ha chọrọ iso ụlọ ọrụ teknụzụ ọ bụla ọzọ ga - arụ ọrụ na azụmaahịa mkpuchi, ha ga - agakwa dijitalụ. ”
Nkwuputa mbụ na-atụ aro na Amazon ga-abanye na ụlọ ọrụ mkpuchi ihe onwunwe na mkpuchi ụlọ akụ na May 2019.
Anyị nwere ihe karịrị 150,000 kwa ọnwa ndị na-agụ akwụkwọ akụkọ reinsurance na ihe karịrị 13,000 ndị debanyere aha kwa ụbọchị. Enwere ike ịchọta ozi mgbasa ozi Ebe a.
Anyị bipụtakwara Artemis.bm, onye mbipụta akwụkwọ akụkọ nke ụlọ ọrụ, data na nghọta metụtara ọdachi agbụ, nchekwa jikọtara mkpuchi, nchekwa mkpuchi, nnyefe mkpuchi ndụ na njikwa ihe ọghọm ihu igwe. Kemgbe emepụtara 20, anyị ewepụtala ma rụọ ọrụ Artemis. Ọtụtụ afọ gara aga, e nwere ihe dị ka ndị na-agụ 60,000 kwa ọnwa.
Jiri ụdị kọntaktị anyị kpọtụrụ ozugbo. Ma ọ bụ chọta ma soro ozi mkpuchi na ntanetị mmekọrịta. Nweta ozi mkpuchi site na email ebe a.
All ọdịnaya nwebisiinka © Steve Evans Ltd. 2020. ikike niile echekwabara. Steve Evans Ltd. (Steve Evans Ltd.) debara aha na England na nọmba 07337195, ebe nrụọrụ weebụ nzuzo na kuki disclaimer